Haaland: “Waxaa igu kallifay saddexleeydii uu Kylian Mbappe ku dhaliyey Camp Nou” – Gool FM
Haaland: “Waxaa igu kallifay saddexleeydii uu Kylian Mbappe ku dhaliyey Camp Nou”
Haaruun February 18, 2021
(Sevilla) 18 Feb 2021. Kaddib markii uu Kylian Mbappe saddexleey ugu shubay Barcelona habeen hore, Erling Haaland ayaa isaguna ahaa geesiga kulankii ka dhacay xalay Spain kaddib markii uu labo jeer shabaqa soo taabtay ciyaartaas oo ay wajaheen Sevilla.
Xiddiga reer Norway ayaana qirtay inuu labo gool dhaliyo inay ku kalliftay saddexleeydii uu xiddiga reer France ku dhaliyey garoonka Camp Nou, taasoo dhiiri-gelin siisay isaga, maadaama lagu ciyaarayey isla dalka Spain.
Haaland ayaa labo gool dhaliyey kulankii 3-2 ay guusha ku qaadatay Kooxda Borussia Dortmund kulankii ka dhacay garoonka Estadio Sanchez Pizjuan, haddana wuxuu dareensan yahay in kooxdiisa ay u baahan tahay inay lugta labaad weli sii dagaalammaan inkasta oo ay hoggaaminayaan haatan lugta hore.
“Waxaan dhalinnay saddex gool taasina waa muhiim, laakiin waa inaan weerarno lugta labaad, waa inaan sii wadno oo aan adkeysanno,” ayuu u sheegay UEFA.
“Waan jeclahay inaan ka ciyaaro Champions League, waxaana igu kallifay saddexdii gool ee uu Mbappe garoonka Camp Nou, waan u mahadcelinayaa isaga, waxa ay ahayd habeen qurux badan” ayuu hadalkiisa ku daray Haaland.
Horudhac: Benfica vs Arsenal… (Labada Kooxood oo doonaya inay ilaashadaan rikoorkooda guuldarro la'aanta Europa League ee xilli ciyaareedkan)